Araka ny fantatrao, ny trano dia ny fampiharana ny toetran'ny tompony. Maro amin'ny aterineto ao amin'ny trano fonenana dia manandrana mampiseho ny hafanan'izy ireo, ny fanandramany ary ny fitiavany ny fironana isan-karazany any an-tsekoly na ireo zavatra kasain'ny tontolo manodidina. Ny sasany toa ny Provence rafitra sy malefaka, ny hafa - avant-garde moderne mamirapiratra, ary ny fahatelo dia ny fomba fanehoana ny natiora ny natiora ao an-trano - zavamaniry zavamaniry, na, ohatra, endrika miaraka amin'ny wallpaper leopard.
Tena mahavariana ity fomba ity, amin'izao fotoana izao ny loparda-tapitrisa leoparda ao an-trano dia tena lamaody, fa amin'ny endriny dia ilaina ny manaraka fitsipika maromaro, mba tsy hanakorontana ny saina sy tena mahafinaritra.
Fitsipika momba ny fampiasana fakan-tahaka amin'ny leopara wallpaper
Ny famolavolana ny efitrano misy ny loko tapakila dia azo zakaina, toy ny rindrina rehetra, ary ny ampahany ihany. Amin'ny tranga voalohany - ny fanamafisana ankapobeny. Tokony hifanaraka tsara ny lamina - mety ho loko voajanahary sy habeny voafaritra, ary loko mainty na fotsy na loko hafa. Aza mampiasa fitaovana fanokanana hafa miaraka amin'ny printy leopard. Raha misafidy ny handravaka rindrina iray na ampahany aminy ianao - dia mety ho tantanana leoparda ho an'ny rindrina miaraka amin'ny sarin'ny bibidia, dia tokony hifidy singa fanohanana ianao: fantsom-bolo amin'ny fanaka, lamba leopard (plaid, curtains, carpet).
Amin'izao fotoana izao dia ny loko misy ny leopard dia novolavolaina tsy amin'ny loko samihafa, fa koa amin'ny endrika hafa - fanampiana, miaraka amin'ny vokatra 3D. Ary na izany aza, miaraka amin'ny sary, manahaka ny hikasika ny enina natiora. Raha ny tena marina, dia hijery ireo tapakila leoparda "shaggy" ao amin'ny efitrano fandriana.
Ho an'ireo efitrano an'ny ankizy dia tsy asiana fanontam-pirinty ny biby - izany dia mety miteraka fanahiana tsy ilaina. Aza milalao tapakila misy sary hosodoko sy trano fisakafoana ara-tsakafo - voamarikao, tsy manentana ny fironana izy ireo. Saingy ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandriana na efitrano toy izany dia hanome fanehoana ivelany, na dia misy kilalao kely aza.
Varavarana anatiny varavarana ekoshpon
Boky fanaka avy amin'ny hazo mafy
Vodiny eo ambanin'ny laminasa
Karipetra ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny
Takelatra ho an'ny lakozia
Seza fitaratra fanoratana
Inona no voninkazo nomena ho an'ny fampakaram-bady?
Ny elanelana eo amin'ny nify
Ny leokocytes amin'ny rà dia ambony
Pizza mit sausages
Ny aretina eo imason'ny saka
Inona no hanomezana zaza iray mandritra ny 6 taona?
Ahoana no hampivelatra ny atidoha amin'ny 100 isan-jato?
Ahoana ny famelana tulle avy amin'ny maingoka?
Sarintany amin'ny fiteny - antony
Zavamaniry 17 izay ilainao amin'izao fotoana izao
Tranombola tsy misy rantsana amin'ny tanana manokana